Dagaalkii feerka ee caawa oo David Haye uu dhulka dhigey Wladimir Klitschko(Sawiro) – SBC
Dagaalkii feerka ee caawa oo David Haye uu dhulka dhigey Wladimir Klitschko(Sawiro)
Mid ka mid ah tartamada ciyaaraha feerka ee dunida ugu xiisaha badnaa ayaa caawa ka dhacay magaalada Hamburg ee wadanka Jarmalka, kaasi oo ay ku kulmeen labada feeryahan ee Wladimir Klitschko oo u dhashay wadanka Ukraine & David Haye oo u dhashay wadanka Britain.
Feerka caawa oo ka dhacay garoonka Imtech Arena football stadium ee magaalada Hamburg, waxaa dhulka caawa lala galay feeryahanka British-ka ah David Haye oo haystey feerka WBA.
Feeryahanka reer Ukraine oo 35 sano jir ah wuxuu difaacanayey horyaalada IBF & WBO oo uu haystey, waxaana guusha uu caawa ka gaaray Haye oo 30 sano jir ah dhaxalsiinaysaa guul caaqibo leh oo uu ka gaaray dagaalka feerka, maadama feeryahanka reer Britain uu yahay nin la loodin waayey oo dhulka soo dhigay feeryahano fara badan.
Dagaalkan caawa dhacay ayaa la isla gaaray ilaa iyo wareega ugu dambeeya ee 11-aad, waxaana lagu kala bixi waayey in nin dhulka la dhigo, ilaa garsooraha dagaalkaasi Referee Genaro Rodriguez uu ku dhawaaqo seeriga isla markaana la joojiyo feerka taasi oo sida sharcigu qabo gudiga garsoorka go’aan ka qaadan doonaan cida guushu ku raacdey feerkaasi.
Labada nin ee dagaalamayey caawa ee David Haye & Wladimir Klitschko midba dhankiisa ayuu gacmaha cirka u taag taagay taasi oo mid kasta isula muuqanyey in ay guushu raacdey laakiin taasi waxaa lagu dhawaaqay dadiiqad ka dib markii la shaaciyey in Wladimir Klitschko uu si buuxda ugu guuleystey dagaalkii caawa.
Inkastoo aan si buuxda shaaca looga qaadin dhibcaha guusha hadana saxaafada ayaa ogaatey in gudigu ay ku dhawaaqeen natiijada ka dib markii la tiriyey dhibcaha feerka ee lala daandaamiyey David Haye, waxaana Wladimir Klitschko uu helay 99 dhibcood halka Haye-na uu helay 57 dhibcdood.
Dhaawac uu sheegtey David Haye.
Feeryahanka reer Britain David Haye wuxuu u sheegay saxaafada in uu maalmo ka hor ku dhaawacmey tababar uu sameynayey isla markaana lugta midig farta suulka xigta ay jabtey, isagoo sheegay in uu ku sigtey goor sii horeysay inuu tartanka ka baxo, laakiin wuxuu sheegay in uu ka doorbiday in uu dagaalamo.
Wuxuu amaanay ninkii ay dagaalameen Wladimir Klitschko oo uu ku tilmaamay feeryahan weyn oo rag badan soo legday, wuxuuna ugu hambalyeeyey guusha uu gaaray.
Tuhun laga qabey garsooraha dagaalkan
Sadexdii maalmood ee la soo dhaafay tuhun xoogan ayaa laga qabay garsooraha dagaalakan loo xuley in uu dhexdhexaadiyo oo lagu magacaabo Genaro Rodriguez kaasi oo u dhashay wadanka Mareykanka.
Genaro Rodriguez waxaa lagu tuhunsanaa in uu u janjanjeero dhanka Klitschko waxaa la sheegay in aan laga guuleysan intii uu Genaro u hayey garsoorenimada, waxaa kaloo la sheegaa in uu jiro xiriir saaxiibtimo oo ka dhaxeeya labadood.
Tababaraha David Haye oo lagu magacaabo Adam Booth 48 saac ka hor wuxuu codsadey in la badalo garsoore Rodriguez isagoo sheegay inaanu ku qabin kalsooni.
Xitaa David Haye maalinimadii shaley wuxuu dalbadey in la badalo Rodriguez isagoo sheegay in uu jeclaan lahaa in uu dagaalka caawa uu dhexdhexaadiyo garsooraha caanka ah ee feerka WBA Mr. Luis Pabon.
Laakiin feeryahanka Wladimir Klitschko ninka la taliya ee Mareykanka ah ee lagu magacaabo Shelly Finkel wuxuu sheegay in ay iyagu kalsooni fiican ku qabaan garsoore Rodriguez.
Si kastaba ha ahaatee feeryahan Wladimir Klitschko wuxuu caawa kala hoyday magaalada Hamburg guul caaqibo weyn u leh, isagoo dusha saartey suumanka horyaalada IBF, WBO & WBA ee dhanka feerka.
Dagaalka caawa waxaa ku sugnaa garoonka oo daawanayey 45 kun oo 10 kun oo ka mid ah waxay ka tageen wadanka UK, kuwaasi oo taageerayey feeryahan David Haye oo isagu bisha October 31-keeda dagaalka feerka isaga fariisan doona, xiligaasi oo uu 31 sano jir noqonayo, waxaana uu sheegay in inta aanu ka fariisan feerka uu laba kulan ringaha u fuuli doono kuwaasi oo laga yaabo in mid ka mid ah uu la yeesho ninka caawa ka guuleystey ee reer Ukraine.
Feerka caawa ka dhacay magaalada Hamburg wuxuu ahaa kii ugu xiisaha badnaa feerarka dhaca tan iyo sanadkii 2002-dii xiligaasi oo ay dagaalameen Lennox Lewis & Mike Tyson, iyadoo Mike Tyson la garaacay.